एस.ई.ई. परीक्षाको नतिजा अबको हप्ता सार्वजनिक गरिँदै
साउन १४, कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको (एसईई) कक्षा १० को परीक्षाको नतिजा अब विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा दिइने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले एक साता भित्र विद्यालय स्तरिय (एसईई) परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार काठमाडौंमा बसेको शिक्षा पत्रकारको छलफलमा परीक्षा वोर्डले देशभरका सबै विद्यालयबाट विवरण आईसकेका कारण अब एक साता भित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रक राजाराम खकुरेलले विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय अनुसार यो साता भित्र नै नतिजा निकाल्ने तयारी भईरहेको जानकारी गराउनुभयो।
यस वर्ष ४ लाख ८२ हजार २ सय १९ विद्यार्थी एसइई परीक्षामा सहभागी हुँदै थिए । तर कोरोना महामारीका कारण परीक्षा सुरु हुनु एक दिनअघि ५ चैतमा परिक्षा स्थगित गरिएको थियो । पछि परीक्षा लिन सक्ने स्थिति नभएपछि विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय लिएको हो। हाल अहिले पनि नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण यथावत नै रहेको छ।
हाम्रो मृगौलाले काम नगर्दा के- के समस्या हुन्छ ?
श्रावण १५ बिहीबार तपाईंको आजको राशिफल